OTP( One Time Password )တောင်းပြီး Account hack ခံရခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့ or လူတိုင်းမအကြစေဖို့ | Online Service Center Myanmar -->
OTP( One Time Password )တောင်းပြီး Account hack ခံရခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့ or လူတိုင်းမအကြစေဖို့
အခုနောက်ပိုင်း အကောင့်ခိုးပြီးလုပ်စားနေတဲ့ မိမဆုံးမ၊ ဖမဆုံးမ၊ သန္ဓေယုတ်တဲ့ ခွေးသူခိုးတွေက Account ခိုးနည်းကို တမျိုးပြောင်းပြီးလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် Recovery test, I Can't login, Phishing, တွေနဲ့ခိုးခဲ့ပေမယ့် အခု OTP Code လေးတွေတောင်းပြီးခိုးကြတယ်။
အတဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်ဖုန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ OTP( One Time Password ) က ကိုယ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်၊ အရေးကြီးတဲ့ဟာ၊ ဆိုတာကိုမသိပဲ လာတောင်းတာနဲ့ ပေးလိုက်ကြတော့တာပဲ။
အဲ့လိုပေးလိုက်တာက ကိုယ့် Account ရဲ့ Password ကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို မသိကြဘူး။ ဝင်လာတဲ့ Message ကို သေခြာမဖတ်ကြည့်တာလည်းပါမယ်။ Facebook password ကို တဖက်က Reset ချလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ "123456 is your Facebook password reset code." ဆိုပြီးဝင်လာတယ်။ "ဒီ 123456 က သင့်ဖေ့ဘွတ် Password ကို ပြောင်းလဲရန်ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။" ဆိုပြီးပါပြီးသား၊ အဲ့ဒါကို သေခြာမဖတ်ကြည့်ပဲ တဖက်လူက ဝင်လာတဲ့ Code လေး ပြန်ပို့ပေးပါဆိုတာနဲ့ အူတူတူအတတနဲ့ သွားပေးလိုက်တယ်၊ ပေးပြီးမကြာဘူး အကောင့်လေးကို ခွေးသူခိုးတွေက သမသွားရော။
Account ပါသွားပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲက အရှက်ကွဲစရာတွေ၊ ငွေကုန်ပေါက်တွေထပ်ဖြစ်ကုန်တယ်။ အမိယုတ်၊ အဖယုတ်လို့ သန္ဓေယုတ်ဖြစ်လာတဲ့ ခွေးသူခိုးတွေက အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုရော၊ အဲ့ဒီအကောင့်ထဲက Friend list တွေထဲကရော ငွေတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ လိမ်တောင်းတော့တာပါပဲ။
Online ပေါ်ကနေ ငွေချေးတိုင်း ဘာကြောင့် အလွယ်တကူမလွှဲပေးသင့်တာလဲ?
ဒီနေ့လိုခေတ်မှာက Mobile Money, Mobile Banking, Mobile Payment, တွေအသုံးများလာတော့ အကောင့်ကို ခိုးထားတဲ့ခွေးသူခိုးတွေက ဘယ်သူရေ၊ ဘယ်ဝါရေ၊ အရေးပေါ်ငွေလိုနေလို့ ခနချေးပါလား၊ အခုလွှဲပေးပါလား၊ ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းကောက်လွှဲပေးလိုက်တော့တာပဲ။ ( အဲ့လို အလွယ်တကူနဲ့ ယုံကြည်ပြီးလွှဲပေးတဲ့သူတွေကလည်း ငအူတွေ၊ ငအတွေပဲလို့ ပြောရမှာပါ။ )
ဒီနေရာမှာ တခုထပ်ပြောချင်တာက Online ပေါ်ကနေ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်( ကိုယ့်မိသားစုဝင်၊ အရမ်းခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ) ပိုက်ဆံလွှဲပေးပါလားဆိုတိုင်း အလွယ်တကူ လုံးဝမှ မလွှဲပေးကြပါနဲ့ ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ်လိုပတ်သက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီး ရင်းနှီး၊ အလွယ်တကူမလွှဲပေးပါနဲ့ ပိုက်ဆံလာချေးရင်၊ ပိုက်ဆံလာလွှဲခိုင်းရင်၊ ဖုန်းနံပါတ်သိရင် ဖုန်းခေါ်ပါ၊ Video call ခေါ်ပြီးအတည်ပြုပါ၊ တကယ့် ကိုယ်သိတဲ့ ကာယကံရှင် အစစ်အမှန် ဆိုတော့မှသာ လွှဲပေးကြပါ။ ဖုန်းနံပါတ်မသိလို့ Messenger ထဲကနေ Free call နဲ့ ဖုန်းခေါ်လို့၊ Video call ခေါ်လို့၊ မကိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီး ဆင်ခြေတွေပေးနေရင် လုံးဝ လုံးဝမှကို မလွှဲပေးပါနဲ့ဆိုတာပါပဲ။
OTP( One Time Password ) ဆိုတာဘာလဲ?
အဓိက နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ OTP ဆိုတာ One Time Password ပါ။ ကိုယ့် Facebook account ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့် Mobile Banking တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Code ပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကိုဝင်လာရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြပါနဲ့၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးပါနဲ့။ တချို့ OTP တွေက မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပဲသုံးလို့ရတာရှိသလို 24 နာရီကျော်မှ သက်တမ်းကုန်တာတွေ၊ အဲ့ဒီ OTP Code ကို မသုံးမချင်း သက်တမ်းမကုန်ပဲ သုံးပြီးမှ သက်တမ်းကုန်တာမျိုးတွေရှိတယ်။
ကိုယ့်ဆီဝင်လာတဲ့ OTP( One Time Password ) ကို ဘယ်သူကိုမှမပြပါနဲ့၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးပါနဲ့။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲဝင်လာတဲ့ OTP Code ဟာ ကိုယ်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကို လုံးဝမှ မေ့မထားပါနဲ့ ဆိုတာပါပဲ။
Mobile Banking တွေအသုံးပြုနေပြီး အူတူတူအတတနဲ့ ကိုယ့်ဆီကို ဝင်လာတဲ့ OTP ကို လာတောင်းတိုင်း ပေးမိလိုက်ရင်၊ သို့မဟုတ် Public မှာ Screenshot ရိုက်ပြီး တင်မိရင်၊ အဲ့ဒီ OTP က Financial Transaction ဖြစ်နေခဲ့ရင် ကိုယ့် ဘဏ်အကောင့်ထဲက ပိုက်ဆံတွေပါ ကုန်သွားနိုင်တယ်။
ဘယ်ကဝင်တဲ့ OTP ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမှမပြမိ၊ မပေးမိကြပါစေနဲ့လို့ နောက်ဆုံးသတိပေးရင်း ဒီပို့စ်လေးကို ဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါပြီ။
အမိယုတ်၊ အဖယုတ်လို့ သန္ဓေယုတ်ဖြစ်လာတဲ့ အောက်တန်းစားခွေးသူခိုး အကောင့်သူခိုးတွေနဲ့ ကင်းဝေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။
Aung Kyaw Soe ( 7.2.2020 - 5:30 PM )